+220 သင့်ဘ ၀ ကိုတောက်ပစေဖို့ပျော်ရွှင်မှုအဆင့်များ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုစုစည်းခဲ့ကြသည် ပျော်ရွှင်မှု၏စာပိုဒ်တိုများ သင်surelyကန်အမှန်ချစ်ကြလိမ့်မည် အကယ်၍ သင်ဟာပျော်ရွှင်တယ်၊ ရွှင်လန်းမယ်၊ အဲဒီခံစားချက်ကိုဝေမျှချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့သင်ဟာ ၀ မ်းနည်းနေပြီးသင့်ကိုပိုပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့စကားစုတွေကိုရှာဖွေနေသည်။ ဤစုစည်းမှုသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးအချို့ကိုဖမ်းယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပုံအချို့လည်းပါ ၀ င်သည်။
ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရမည်။ ပျော်ရွှင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသည်ကိုသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်အခြားနေရာများတွင်သင်ရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ကျော်ကြားသောလက်ရှိစာရေးဆရာများသို့မဟုတ်သမိုင်းကြောင်းမှကိုးကားချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်အမြဲတမ်းအကျိုးရှိသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ပညာရှိစကားတွေနဲ့စဉ်းစားပြီးရောင်ပြန်ဟပ်စေကတည်းက။ နောက်ထပ် ado မရှိဘဲ, အောက်တွင်ကျွန်တော်စာရင်းတင်ပြ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုဗဟိုပြုခြင်း၏အသံသာဖြစ်သည်။ - Bhagwan Shree Rajneesh ။
ကြီးမားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကြီးမားသောကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်ပျော်ရွှင်သောဘဝ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ - ဝီလျံ Ellery Channing ။
ဂရုစိုက်မှုပုံစံအားလုံးတို့တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ဂရုပြုခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အသေဆုံးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ - Bertrand ရပ်စယ်လ်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သာတာ ၀ န်ရှိသည်။ ငါ့အတွက်ဘာကောင်းမကောင်းကိုဘယ်သူမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ - Paulo Coelho
ငြူစူမှုသည်လူတို့၏သဘာဝပင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အကျင့်ဆိုးများနှင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှု၏ရန်သူအဖြစ်ယူမှတ်ပြီးမကောင်းသောနတ်ဆိုးလိုငိုကြွေးရန်ကြိုးစားရမည်။ - အာသာ Schopenhauer ။
ပျော်ရွှင်သောသူတို့၌အမှားမကင်းသောအမှားတစ်ခုရှိသည်။ ကံဆိုးသူများသည်သူတို့၏အမှားကြောင့်အမြဲတမ်းကံဆိုးခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ? Edme P.Beauchêne
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတံခါးဖွင့်ပြီးငါတို့ဘဝထဲ ၀ င်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ - နှင်းဆီလိန်း။
ဒီဘဝမှာပျော်ရွှင်ဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုကလူမိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ပျော်ဖို့ပါ။ - Sigmund Freud ။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိလူတွေအကြောင်းကျွန်တော်သိတဲ့အဆိုးဆုံးပဲ။ - Ernest Hemingway
လူ့ဘ ၀ ၏ပျော်ရွှင်မှုသည်အစိုးရ၏အဆုံးဖြစ်သည်။ - ဂျွန်အဒမ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေခြင်း၌ကျေနပ်မှုမရရှိပါ၊ ၎င်းသည်လိုက်စားခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိသည်။ - Denis Waitley ။
မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဆက်ပြီးမကြောက်ပါနဲ့၊ သင်အနည်းဆုံးသံသယရှိတဲ့နေရာမှာတံခါးတွေဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ - ဂျိုးဇက်ကမ့်ဘဲလ်။
သင်၏သားသမီးများကိုသီလရှိရန်အကြံပြုပါ၊ သီလတစ်ခုတည်းကသာငွေကိုမဟုတ်ဘဲပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ - Ludwig van Beethoven
သင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်၊ နောက်ဆုံးမှာသင်တွေ့လိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးဟာပတ် ၀ န်းကျင် ဖြစ်၍ သင့်ကိုအိမ်တံခါးဆီပြန်ခေါ်သွားစေမှာပါ။ - Robert Brault ။
ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ခုန်ခြင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ - အမည်မသိ။
ဘဝသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ - ကွန်ဖြူးရှပ်။
မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုက်နာပါ၊ မကြောက်ပါနဲ့။ သင်မသိသေးတဲ့နေရာမှာတံခါးတွေဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ —Joseph Campbell
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲ။ သင်ပျော်ရွှင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ဘဝတွင်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းရှိ / မရှိဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ - Valerie Bertinelli ။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာမှသိပ်အရေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ - Antonio Gala ။
မကြာခဏဆိုသလိုပျော်ရွှင်မှုကိုမရှာဘဲပျော်ရွှင်စွာနေတာဟာကောင်းပါတယ်။ - Guillaume Apollinaire ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှု (သို့) ကံမကောင်းမှုအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေအပေါ်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားအပေါ်မူတည်သည်။ - မာသ ၀ ါရှင်တန်။
အသက်ရှင်သောပျော်ရွှင်မှုသည်ပေးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာမှဆင်းသက်လာသည်။ - Isabel Allende ။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဟာဘာလဲ၊ ဒါဟာအခွက်တဆယ်၊ - Herman Hesse ။
ငါတို့နှင့်ကိုက်ညီသောဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းထက်ပျော်ရွှင်မှုမရှိပါ။ ? Rabih Alameddine ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်မှုမဟုတ်ဘဲသတိထားရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ - မေးဒ Barthel ။
ငါ့သမီး၊ မျက်စိမမြင်သောသူရှေ့မှာငိုကြွေးခြင်းထက် သာ၍ ကောင်း၏။ ? အဲလက်စ် Rovira ။
သင်အနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အခါဝမ်းမြောက်ခြင်း။ - လော်ရာ Restrepo ။
စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်မဖြစ်နိုင်သည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ - Mark Twain
ငါပျော်ရွှင်မှုကိုမရနိုင်သောအရာအဖြစ်မရှုမြင်သောကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်ပြီးမလိုက်သင့်ကြောင်းယခုငါသိပြီ။ - Jorge Luis Borg ။
တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချစ်မြတ်နိုးသူများအကြားတူညီသောဘ ၀ သည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ - ဂျော့ခ်ျသဲ။
ဒီနေ့မှာတော့လူသားတွေဟာစဉ်းစားတတ်ပြီးတွေးတတ်ပုံကိုသိတဲ့ယောက်ျား၊ ယောက်ျားတွေလိုအပ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကတခြားသူတွေကိုထပ်တူလုပ်ဖို့သင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်၊ ဒီနည်းအားဖြင့်တစ်နေ့မှာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ မင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို။ - ကားလို့စ်ဘာနာဒိုဂွန်ဇာလက်ဇ်ပီကိုတို။
ပျော်ရွှင်မှုကိုရယူခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုယခုပင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ - Facundo Cabral ။
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဆိုသည်မှာကာကွယ်ဆေး၊ antioxidant နှင့် antiseptic တို့ဖြစ်သည်။ - ဂျွန်ဟင်နရီ Jowett ။
သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုသူတို့ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ကြောင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းတိုင်းကိုပြောပြပါ၊ သင်သက်သောင့်လေလေပမာဏကိုတိုင်းတာသည်မဟုတ်၊ သင့်စိတ်နှလုံးလှုပ်ခတ်နေသောအချိန်များ - ရယ်မောခြင်း၊ အံ့အားသင့်ခြင်း၊ အတိုင်းအတာမရှိဘဲလိုအားလုံး၏ပျော်ရွှင်မှုကို။ - ပါပလော Picasso ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်တစ်ခါတစ်ရံကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းသည်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ - Paulo Coelho
ပျော်ရွှင်မှုအားလုံးသည်ကူးစက်တတ်ပြီးမုန်းတီးမှု၏ခံစားချက်ကိုဖျက်စီးသည်။ - အိုင်ရင်းNémirovsky။
သင်လိုချင်သောအရာအချို့မရှိဘဲဖြစ်ခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ - Bertrand ရပ်စယ်လ်။
ပျော်ရွှင်မှုသည်ဆုတစ်ခုမဟုတ်၊ အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အပြစ်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ - ရောဘတ် G. အ Ingersoll ။
ရွှင်လန်းမှုကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်တစ် ဦး အချည်းနှီးသော ဦး ခေါင်းရှိခြင်းအတွက်ပါဝင်သည်။ - အန်တိုနီယို Machado ။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသတ္တိတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ - Holbrook ဂျက်ဆင်။
ပျော်ရွှင်သောသူသာလျှင်ပျော်ရွှင်မှုကိုမျှဝေနိုင်သည်။ - Paulo Coelho
ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်အရာတို့၌မဟုတ်၊ - ရစ်ချတ် Wagner ။
လူအများစု၏ပျော်ရွှင်မှုသည်ကြီးမားသောကပ်ဘေးကြီးများသို့မဟုတ်ဆိုးဝါးသောအမှားများကြောင့်မဟုတ်ဘဲသေးငယ်သောအဖျက်လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ - Ernest Dimmest
လူများစွာသည်ကြီးစွာသောပျော်ရွှင်မှုကိုစောင့်မျှော်ရင်းပျော်ရွှင်မှုအနည်းငယ်ကိုလက်လွတ်သည်။ - ပုလဲအက်စ်ဘာ့။
အကြီးမားဆုံးသောအလှူငွေထည့်ဝင်စဉ်သင်ပိုမိုပျော်ရွှင်သည်။ - ရောဘတ်အက်ဖ်။ ကနေဒီ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုအလွယ်တကူအစာချေမဖြစ်, ဒါက, အစား, အလွန်ရေတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ - Miguel က de Unamuno ။
လူသည်ထင်သည်အတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲရသည်။ - ဆီနီကာ။
ကမ္ဘာကြီးကိုယူဆောင်လာနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်။ - Friedrich von Schiller ။
အဝေးကွင်းသွားလျှင်ရွှင်လန်းမှုထက်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းအဘယ်အရာကမျှမကျန်ရစ်ပါ။ - Fito Páez။
ပျော်ရွှင်မှုဟူသည်လူတစ် ဦး စီသည်၎င်းကိုသဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ်ထဲ၌ထည့်ထားသောအရာဖြစ်သည်။ - Ugo Betti ။
သင်၏အလုပ်တွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာပါ။ - ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်။
ပျော်ရွှင်မှုအားလုံးသည်သတ္တိနှင့်အလုပ်အပေါ်မူတည်သည်။ - Honoré de Balzac ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေရန်ထူးခြားသောအချိန်လေးများကိုငါမလိုက်ချင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အာရုံစိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေ့ကျင့်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ရှေ့မှောက်၌ရှိနေသည်။ - Brene ဘရောင်း။
ပျော်ရွှင်သောလူများသည်လုပ်ရပ်များကိုစီစဉ်သည်၊ ရလဒ်များကိုမစီစဉ်ပါ။ - Dennis Waitley ။
လူ့သဘောသဘာဝကြီးမားသောအမှားသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုကိုအမြဲတမ်းအစပြုပြီးအမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ - Julio Ramón Ribeyro ။
အရိုးရှင်းဆုံးအရာများသည်အကြီးမားဆုံးသောပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေနိုင်သည်။ - Izabella Scorupco ။
ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင်တခြားသူတွေကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ - အဲလ်ဘတ်ကမူးစ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်မှုရရန်ကြိုးစားရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေရာတည်းတွင်မပျော်ရွှင်ပါကမည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်မပျော်ရွှင်နိုင်ပါ။ - Ernie ဘဏ်များ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုတော်ရုံသင့်ရုံမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ - Johann ဒဗလျူ Goethe ။
ပျော်ရွှင်မှုအတွက်လမ်းမရှိ၊ ပျော်ရွှင်မှုသည်လမ်းလည်းဖြစ်သည်။ - Thich Nhat Hanh
ငါတို့ကိုအောင်စေသောသူတို့၌ကျေးဇူးပြုပါစေသော။ ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုပွင့်လန်းစေသည့်ချစ်စရာကောင်းသောဥယျာဉ်မှူးများဖြစ်သည်။ - Marcel Proust ။
မင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ - David D.
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာကိုဆက်ရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ဘူး သင်သည်ဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေနေပါကဘယ်သောအခါမျှအသက်ရှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ - အဲလ်ဘတ်ကမူးစ်။
ပျော်ရွှင်မှုကိုဟူသောစကားလုံးအားသင်နားလည်လိုပါက၎င်းကိုအဆုံးအဖြစ်မဟုတ်ဘဲဆုတစ်ခုအဖြစ်နားလည်ရန်လိုသည်။ - Antoine de Saint-Exupéry
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စရပ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်အချိန်ကာလ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများသည်မှန်ကန်ပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုစိတ်ချစွာခံစားနိုင်ကြသည်။ - Ambrose Bierce ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုမွေးမြူရမည်။ ဒါဟာဇာတ်ကောင်လိုပါပဲ ၎င်းသည်ခဏလုံခြုံစွာကျန်ရစ်နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပေါင်းပင်များဖြစ်လာလိမ့်မည်။ - အဲလစ်ဇဘက်စတူးဝပ်ဖဲ့လ်ပ်။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပျောက်ဆုံးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသေချာပါတယ်။ - Jorge Bucay ။
ငါ့ရှေ့မှာလမ်းမလျှောက်နဲ့၊ ငါမင်းနောက်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူး ငါ့နောက်သို့မလျှောက်နှင့်၊ ကျွန်ုပ် ဦး ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘဝ၌ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခု၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်။ - ဂျော့ခ်ျသဲ။
လုံခြုံရေးအဓိကကတော့အံ့အားသင့်စရာပါ။ ၎င်းသည်သဘာဝတွင်မတည်ရှိပါ။ ဘဝဟာရဲရဲစွန့်စားခန်းတစ်ခုပါ။ - Hellen Keller ။
မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းမင်းကိုပြောတာထက်ကံမကောင်းတဲ့သူကိုမပြောပါနဲ့။ - Plutarch ။
ငါတို့ကြီးပြင်းလို့ငါတို့ကစားတာကိုမရပ်ဘူး။ ကျနော်တို့ကစားခြင်းကိုရပ်တန့်သောကြောင့်ကျနော်တို့ကြီးထွားလာသည်။ - ဂျော့ခ်ျဘာနာ Shaw ။
လူတိုင်းတွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည့်နည်းလမ်းရှိသည်။ - Shahrukh Khan ။
မင်းကအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုကိုမရနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတယ်။ - အမည်မသိစာရေးသူ။
ပျော်ရွှင်မှုရရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာလူထုံကစားရန်၊ နောက်တစ်ခု၊ ? Enrique Jardiel Poncela ။
သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမုန်တိုင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါကသင်သည်နေရောင်ခြည်ကိုဘယ်တော့မျှခံစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ - မောရစ်အနောက်
လွတ်ပါ။ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ - ဗုဒ္ဓ
လူအများအပြားတို့သည်ပျော်ရွှင်မှုဝေမျှခြင်းကိုသူတို့တစ်ခါမျှမတွေ့ခဲ့ရခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲပျော်ရွှင်မှုကိုမခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ - ဝီလျံ Feather ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်ဆက်ဆံမှုနှင့်တူ၏။ တစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ - Noel Clarasó။
ပျော်ရွှင်မှု၏လှည့်စားခြင်းနှင့်ရာဇဝတ်မှုထင်ယောင်ထင်မှားမှလွတ်မြောက်ပါစေသော! အလုပ်၊ ပင်ပန်းမှု၊ နာကျင်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ကိုပေးပါ။ - George Sand ။
အသိဉာဏ်ရှိလူများတွင်ပျော်ရွှင်မှုသည်ကျွန်ုပ်သိသောအထူးဆန်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ - Ernest Hemingway
အကြင်သူသည်ရွှင်လန်း၏။ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လုပ်တတ်သောသူသည်ဝမ်းမြောက်တတ်၏။ - ဂျိုဟန် Wolfgang ဗွန် Goethe ။
ပျော်ရွှင်ရန်နည်းလမ်းတစ်မျိုးတည်းသာရှိသည်။ သူတစ်ပါးအတွက်အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်။ - Leon Tolstoy ။
သက်ရှိသတ္တဝါများသည်ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်လိုသော်လည်းယင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုမရပ်တန့်ကြပါ။ ပျော်ရွှင်မှုကိုတောင့်တကြသော်လည်းသူတို့၏မသိနားမလည်မှုကြောင့်၎င်းကိုရန်သူကဲ့သို့ဖျက်ဆီးပစ်ကြသည်။ - Shantideva ။
ရယ်မောခြင်းကကြောက်ရွံ့မှုအတွက်အဆိပ်ပါ။ - ဂျော့ခ်ျ RR မာတင်။
ပျော်ရွှင်မှု၊ စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုဟူသည်အတွင်းပိုင်းအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့စိတ်အေးအေးထားပါကမင်းပျော်ရွှင်ပါစေ။ သင်၏စိတ်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိသော်လည်းသင့်မှာအခြားဘာမျှမရှိတော့လျှင်သင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါသည်။ သင်၌ပျော်ရွှင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ စွမ်းအားတို့ဖြင့်ဤလောကမှပေးသမျှအရာအားလုံးရှိသော်လည်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုမရှိလျှင်သင်ဘယ်တော့မျှပျော်ရွှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ - Dada Vaswani ။
မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားလျှင်မည်သူမျှပျော်ရွှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ - Jean-Jacques Rousseau
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့တစ်ယောက်ယောက်ကိုအားပေးဖို့ကြိုးစားတာပါပဲ။ - Mark Twain
အသိပညာသည်ပျော်ရွှင်မှု၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်။ - ဆိုကရေးတီး
စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းကတော့လုံးဝပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစွန့်စားခြင်းဖြစ်သည်။ - Chuck Palahniuk ။
စည်းစိမ်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာရရှိရန်မဟုတ်ဘဲလိုအပ်ချက်အနည်းငယ်သာရှိရန်ဖြစ်သည်။ "Epictetus ။ "
ဘ ၀ ၌အောင်မြင်မှုဟူသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ပျော်ရွှင်မှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောပန်းတိုင်များကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ - Deepak Chopra ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာများကိုသဘောပေါက်ရန်မဟုတ်ပါ၊ - အဲဖရက် Tennyson ။
သင်၌ရှိသည်အတိုင်းအလျှင်းမတတ်နိုင်။ - ဟင်နရီရပ်ကွက် Beecher ။
အောင်မြင်မှုဆိုတာသင်လိုချင်တာကိုရဖို့ပါ။ ပျော်ရွှင်မှု။ - Ralph Waldo အီမာဆန်
ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ခံမှုနှင့်တိုက်ရိုက်အချိုးအစားနှင့်တိုး။ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ - မိုက်ကယ်ဂျေ Fox ။
ချောကလက်တစ်ခွက်လိုမျိုး၊ ခါးသီး။ သကြားလုံး ပျော်ရွှင်စွာနေပါ။ - ဂျိုအန်း Harris က။
ပျော်ရွှင်စရာကလေးဘဝကိုဘယ်တော့မှနောက်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ - Berke Breathed ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုနေ့တိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုနည်းပါးနေသည်။ - Alejandro Jodorowsky
ပျော်ရွှင်မှု - သူတစ်ပါး၏စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသည့်သာယာကြည်နူးဖွယ်ခံစားမှု။ - Ambrose Bierce ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်အလွန်နည်းလွန်းသောလမ်းကြားတွင်ရပ်တန့်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ - Pollock ပြောင်းလဲခြင်း။
ပျော်ရွှင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုခံစားရစေသောအရာ၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ - Benjamin Spock ။
ထိန်းချုပ်ထားသောစိတ်သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေသည်။ - ဂေါတမဗုဒ္ဓ။
အရာရာတိုင်းကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုအနည်းငယ်သာလုံလောက်ပြီ။ - ilemile Zola ။
ဇာတိမြေ၏ကောင်းကျိုးကိုရရှိခြင်းသည်လူ့ပျော်ရွှင်မှု၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်။ - Francisco de Miranda ။
မည်သူမဆိုသူမကိုချစ်သရွေ့မိန်းမတစ်ယောက်နှင့်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
ခိုင်ခံ့သောစိတ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေလော့။ - Epitheto ။
ပျော်ရွှင်သောလူများသည်အစီအစဉ်၏ရလဒ်များကိုမဟုတ်ဘဲလုပ်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်သည်။ - Denis Waitley ။
သီလနှင့်အလေးအနက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိသည့်ပျော်ရွှင်မှုသာလျှင်ဘဝသည်ဂိမ်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ - အရစ္စတိုတယ်။
ကျနော့်အမြင်တွင်၊ ပျော်ရွှင်မှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အရာရာတိုင်းတွင်အလယ်အလတ်တန်းစားခြင်းပါဝင်သည်။ - Giuseppe Baretti ။
လူ့ပျော်ရွှင်မှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားသောကံကောင်းခြင်းများဖြင့်မရရှိနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်ဖြစ်ခဲခဲသည်၊ သို့သော်နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်သောအရာအနည်းငယ်နှင့်အတူ။ - Benjamin Franklin ။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာငါတို့ရှာတွေ့တဲ့နေရာ၊ ငါတို့ရှာတွေ့ခဲတဲ့နေရာပါ။ - ဂျေ Petit Senn ။
လွတ်လပ်မှုဆိုတာပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။ - Susan B. Anthony
သီလမရှိသောသူသည်ဆင်းရဲခြင်း၌လည်းကောင်း၊ ပညာသတိရှိသောသူမူကား၊ ? ကွန်ဖြူးရှပ်။
ပျော်ရွှင်မှုသည်အောင်မြင်မှု၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုကြိုးပမ်းမှု၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့တည်ရှိသည်။ - Franklin D. Roosevelt ရုစဗဲ့။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာလဲ၊ - Germaine က de Stael ။
တစ်ချိန်ကဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုမိမိလက်၌တုန်လှုပ်စေသောသူသည်ဘယ်တော့မျှသေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ - ဟိုဆေး Hierro ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်သူတစ်ပါး၏ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုလားသူများထက်မိမိတို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုလားသူများများရှိပါကမကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်ပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ - Bertrand ရပ်စယ်လ်။
မင်းဝမ်းနည်းမှုအကြောင်းကိုမင်းမသိဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတန်ဖိုးထားလို့မရပါဘူး။ - Nana Mouskouri ။
ဘ ၀ ၌အဆုံးစွန်ပျော်ရွှင်မှုသည်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုချစ်နေသော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်ပိုမိုတိကျစွာသင်ကိုချစ်ကြောင်းသိခြင်းဖြစ်သည်။ - ဗစ်တာဟူဂို။
ပျော်ရွှင်မှုလိုအလှအပအတွက်အလှကုန်လည်းမရှိဘူး။ - မာရီယာမစ်ချယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မနာလိုမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့မနာလိုသူများ၏ပျော်ရွှင်မှုထက် ပို၍ ကြာရှည်သည်။ - Heraclitus ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုက္ခသည်များမဟုတ်ပါကဤကမ္ဘာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေနိုင်မည်လော။ - Franx Kafka ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုဆုံးရှုံးဖို့သေချာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကအရာအားလုံးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်လိုချင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတွေ့ပြီ။ - Bette Davis က။
အခြားသူများအတွက်နေထိုင်ခြင်းသည်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားတစ်ခုသာမကပျော်ရွှင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေလည်းဖြစ်သည်။ - သြဂတ် Comte ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်ဆန့်ကျင်မှုများမရှိဘဲ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းအခြေအနေဖြစ်သည်။ ဒါဟာဆင်ခြင်တုံတရားရည်မှန်းချက်ကိုသာလိုလားသော, ဆင်ခြင်တုံတရားတန်ဖိုးများကိုသာရှာခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားလုပ်ရပ်များအတွက်သာသူ၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုရှာဖွေသောသူသည်ဆင်ခြင်တုံတရားလူသည်သာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ - Avn Rand ။
ဝမ်းနည်းမှုကအဆုံးမရှိ၊ - Vinicius de Moraes ။
အခြားသူများနှင့်မနှိုင်းယှဉ်ဘဲသင်၏ဘ ၀ ကိုပျော်မွေ့ပါ။ - Marquis က de Condorcet ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေကြသည်၊ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်သူတို့၏နေအိမ်ကိုရှာဖွေသကဲ့သို့သူတို့၏နေရာကိုသိရှိခြင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုမသိဘဲ၊ - ဗော်တဲယား။
လူတိုင်းကတောင်ထိပ်မှာနေချင်ကြပေမဲ့သင်တောင်တက်နေစဉ်အတွင်းပျော်ရွှင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအားလုံးတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ - အန်ဒီရွန်နီ
ဘဝသည်သံသရာဖြစ်ပြီးဇာတ်လမ်းတစ်ခု၏အဆုံးသည်အသစ်တစ်ခု၏အစနှင့်အမြဲတမ်းတိုက်ဆိုင်နေပြီး၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုထိုးဖောက်တိုင်းအချိန်တိုင်းမတူညီသော ၀ မ်းနည်းမှုနှင့်အတူထပ်တူထပ်မံစောင့်နေရမည်။ - Edgar Morin ။
ကမ္ဘာကြီးသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းစဉ်းစားသော်ပျော်ရွှင်သောနေ့သည်အံ့ဖွယ်အမှုနီးပါးဖြစ်သည်။ - Paulo Coelho
ပျော်ရွှင်မှုဟူသည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးများကိုရရှိခြင်းမှရရှိသောသတိပြုမှုအခြေအနေဖြစ်သည်။ "Ayn Rand ။ "
ဉာဏ်ပညာသည်ပျော်ရွှင်မှု၏အမြင့်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ - Sophocles ။
ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်မှုမှာကျွန်ုပ်၌ရှိသောအရာများကိုမည်သို့တန်ဖိုးထားရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိပြီးကျွန်ုပ်၌မရှိသောအရာကိုအလွန်အမင်းမလိုလားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ - Leon Tolstoy ။
ပျော်ရွှင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်လောက၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုတွေ့မြင်ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်၏တာ ၀ န်နှင့်ပန်းတိုင်ကိုမမေ့ဘဲ။ - Paulo Coelho
ပျော်ရွှင်မှုကိုသူမ၏လိုအပ်နေသည်မဟုတ်။ - ဆီနီကာ။
အရာအားလုံးကိုမှလွဲပြီးအရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ မပျော်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းမပြောပါနဲ့။ - Mark Twain
ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောပျော်ရွှင်မှုသည်စတင်သည်။ - Cesare Pavese ။
ရွှင်လန်းခြင်းသည်အရာအားလုံးကိုရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေသောအတွေးအခေါ်ပညာရှင်၏ကျောက်ဖြစ်သည်။ - Franklin D. Roosevelt ရုစဗဲ့။
သင်၏အသက်ကိုနှစ်ပေါင်းမဟုတ်ဘဲသူငယ်ချင်းများဖြင့်ရေတွက်ပါ။ မင်းရဲ့ဘဝကိုအပြုံးတွေမဟုတ်ဘဲမျက်ရည်မကျစေဖို့ရေတွက်ကြည့်ပါ။ - John Lenon
လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဝေဒနာကိုသူတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးလို့မဟုတ်ဘဲပျော်ရွှင်မှုကိုမခံစားခဲ့ရလို့ပါ။ - ဝီလျံ Feather ။
အခြားသူများကိုရွှင်လန်းမှုပေးခြင်းမှသင်ပိုမိုပျော်ရွှင်သောကြောင့်သင်ပေးနိုင်သောပျော်ရွှင်မှုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်အချိန်များစွာပေးသင့်သည်။ - Eleanor Roosevelt ရုစဗဲ့။
အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းသည်သီလထက်ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ - Anatole ပြင်သစ်။
ကံဇာတာ၊ အောင်မြင်မှု၊ ဘုန်းအသရေ၊ စွမ်းအားသည်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးပွားစေနိုင်သော်လည်းမပေးနိုင်ပါ။ ချစ်ခင်တွယ်တာမှုသာလျှင်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးသည်။ - Benjamin Disraeli ။
မင်းနဲ့မင်းပြောချင်တဲ့စကားစုရဲ့ပထမစကားကဒီလိုပဲ။ ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူသာလျှင်ပျော်ရွှင်မှုကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ - Paulo Coelho
ပျော်ရွှင်မှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြားသူများနှင့်တိုက်ခိုက်ရန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သဘောသဘာဝကိုတိုက်ထုတ်ရန်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ - Dennis Prager
ပျော်ရွှင်မှုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးသောဆေးဝါးမရှိပါ။ - ဂါဗြေလ Garcia Marquez ။
ပျော်ရွှင်မှုထက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အခြားမည်သည့်တာ ၀ န်မျှမရှိကြောင်းသူတို့ကိုနားလည်စေပါ။ - Paul Claudel
သင်ရရှိနိုင်သောအကြီးမားဆုံးပျော်ရွှင်မှုမှာသင်ပျော်ရွှင်မှုမလိုအပ်သည်ကိုသိခြင်းဖြစ်သည်။ - ဝီလျံ Saroyan ။
ပျော်ရွှင်မှုရရန်နည်းလမ်းတစ်မျိုးတည်းသာရှိသည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒထက်ကျော်လွန်သောအရာများအားစိုးရိမ်ခြင်းမှရပ်တန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ - Epictetus ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ခါတလေကျွန်မစိတ်ပျက်အားငယ်မိပေမယ့်သင်ဟာသင့်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုချစ်မြတ်နိုးလာတဲ့အခါပျော်ရွှင်မှုခံစားရမယ်လို့ထင်တာထက်ပိုပါတယ်။ - Enrique Iglesias
ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သော့ချက်တစ်ခုမှာမှတ်ဥာဏ်မကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ - Rita မဲဘရောင်း။
လေ၊ တောင်များ၊ သစ်ပင်များ၊ လူများလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနှင့်အတူငါ့အဆုတ်များထိုးတက်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ငါထင်တာကပျော်ရွှင်မှုပဲ။ - Sylvia Plath ။
ဖြစ်နိုင်သမျှကိုသိရှိခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှု၏အစဖြစ်သည်။ - George Santayana
တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ပျော်ရွှင်မှုသည်သင်၏အပြုံး၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသင်၏အပြုံးသည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှု၏ရင်းမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ - Thich Nhat Hanh
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာမှကုန်ကျစရာမလိုပါဘူး၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတာသိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုရှာရတာခက်ပါတယ်။ - Pedro Pantoja Santiago ။
အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။ မကြောက်ပါနဲ့၊ - Jules Renard ။
ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကြီးမားသောအတားအဆီးတစ်ခုသည်ပျော်ရွှင်မှုများစွာရရှိရန်ဖြစ်သည်။ - Bernard က de Fontenelle ။
လွှတ်ပေးရန်သင်ယူပါ။ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ - ဗုဒ္ဓ
ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရရန်ရှာကြံသောလူအမျိုးမျိုး။ သူတို့သည်သင်၏လမ်းတွင်မရှိသောကြောင့်သူတို့ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ - အိပ်ချ်ဂျက်ဆင်ဘရောင်း။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သာပျော်ရွှင်နိုင်ပြီးယခုအချိန်သည်ဘယ်သောအခါမျှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့မြင်ရန်မည်မျှရိုးရှင်းသနည်း။ - Gerald Jampolsky ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကောင်းသော်လည်းစိတ်၏စွမ်းအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသောနာကျင်မှုကဖြစ်သည်။ - Marcel Proust ။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသင်လိုချင်တာကိုအမြဲတမ်းလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ - Leon Tolstoy ။
ပျော်ရွှင်လေလူတွေကပိုပျော်ရွှင်လာလေလေ၊ - Paulo Coelho
စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်၏ရွှင်လန်းမှုမှအရည်များကိုယနေ့ခိုးယူသည်။ - လီယို Buscaglia
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမင်းရဲ့အတွေး၊ မင်းပြောတာ၊ သဟဇာတဖြစ်မှုတို့ပဲ။ - မဟတ္တမဂန္ဒီ။
ပျော်ရွှင်သောဘ ၀ ကိုဖန်တီးရန်မှာအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွင်သင်ကိုယ်တိုင်အတွင်း၌ရှိသည်။ - Marco Aurelio Antonino ။
ပျော်ရွှင်မှု၏အကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်မှာသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူနေခြင်းဖြစ်သည်။ - Bernard le Bovier က de Fontenelle ။
သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုတစ်စုံတစ် ဦး အပေါ်မှီခိုရန်ခွင့်မပြုပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာထိုသူသည်သင်ထင်သည့်အတိုင်းအမြဲဖြစ်မည်မဟုတ်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
သူကသူမဟုထင်လျှင်မည်သူမျှပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ - Publio Siro ။
လူတစ်ယောက်ဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးသာယာဝပြောတဲ့အချိန်အထိမကျန်းမာပါဘူး။ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောမှုတို့သည်လူတို့၏အပြင်ပန်းနှင့်အတွင်းပိုင်းသဟဇာတဖြစ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ - James Allen
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာနေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ - ဆစ်ဒနီဂျေဟာရစ်။
တစ်ချိန်ချိန်မှာဘယ်နေရာမဆိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ကိုယ်တိုင်မလွှဲမရှောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါကသင့်ရဲ့နာရီရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးဒါမှမဟုတ်ခါးသီးမှုဖြစ်နိုင်တယ်။ - ပါပလော Neruda ။
ငါတို့ပေးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုသာပိုင်ဆိုင်သည်။ - Edouard Pailleron ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်နှင့်နှလုံးသားကိုကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှအဝေးဆုံးသို့ရောက်အောင်သာလျှင်ပျော်ရွှင်မှုရရှိသည်။ - လီယိုရိုစတန်။
ပျော်ရွှင်မှုသည်မိုးတိမ်နှင့်တူသည်၊ အကယ်၍ သင်သည်လုံလောက်စွာစိုက်ကြည့်လျှင်၎င်းသည်အငွေ့ပျံသွားသည်။ - စာရာ McLachlan ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်မပျော်ရွှင်မှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ - အဲရစ်ဟော့ဖ်။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကဘာမဟုတ်ဘူး ဒါဟာအခွက်တဆယ်၊ - Herman Hesse ။
အခြားသူများ၏အကျိုးကိုပိုမိုအလေးထားသည့်ပိုမိုသနားကြင်နာတတ်သောစိတ်ထားသည်ပျော်ရွှင်မှု၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ - ဒလိုင်းလားမား။
ငါတို့နှင့်တူသောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်လိုသောအရာနှင့်ကိုက်ညီသောအခါ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်။ - Malcolm Forbes မဂ္ဂဇင်း။
ပျော်ရွှင်မှုကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသောဂိမ်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး ဆက်၍ ယုံကြည်မည်နည်း။ ? Julio Cortazar
အကြီးမားဆုံးသောပျော်ရွှင်မှုသည်မမျှော်လင့်သောအရာဖြစ်သည်။ ? ဝီလျံ Thackeray ။
လိုအပ်နေသူများကိုကူညီခြင်းသည်တာဝန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာမကပျော်ရွှင်မှုလည်းဖြစ်သည်။ ? ဟိုဆေးမာတီ။
မင်းဘ ၀ မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမထိုက်တန်ဘူးလို့ဘယ်သူ့ကိုမှမခံစားစေနဲ့။ ? Paulo Coelho
ပျော်ရွှင်မှုသည်လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်လွတ်လပ်ခြင်းသည်ရဲရင့်ခြင်း၌တည်၏။ ? Pericles ။
ကမ္ဘာပေါ်၌ပျော်ရွှင်မှုကိုများပြားစေသည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုပိုင်းခြားရန်ဖြစ်သည်။ - Paul Scherer
မင်းကိုမလုပ်ချင်တာကိုတခြားသူတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ - ကွန်ဖြူးရှပ်။
သင်ပျော်ရွှင်နေသလားသင်ကိုယ်တိုင်မေးပါ။ - John Stuart Mill ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်ရောက်ရှိရန်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘဲခရီးသွားလာရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ - မာဂရက် Lee က Runbeck ။
ချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လှံကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ? Baltasar Gracián။
ငါတို့လုပ်သောအရာသည်ပျော်ရွှင်မှုကိုအမြဲဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဘာမှမလုပ်ပါကပျော်ရွှင်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ - အဲလ်ဘတ်ကမူးစ်။
အလွန်ပျော်ရွှင်သောသူသည်သေချာပေါက်ကောင်းပေသည်။ သို့သော်သူသည်သူ၏လိမ္မာပါးနပ်မှုနှင့်အတူအောင်မြင်မှုအရှိဆုံးကြိုးစားသည်ကိုတိတိကျကျရရှိသည်ဖြစ်သော်လည်းသူသည်အထူးချွန်ဆုံးသူမဟုတ်ပါ။ ? Friedrich Nietzsche ။
ပျော်ရွှင်မှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ - Denis Diderot ။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုလိုက်နာဘယ်တော့မှမငါ့ကိုနှုတ်ထွက်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောပါ, ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်ထားသူတွေကိုနာကျင်စေသောပင်လယ်, ကောင်းကင်နှင့်မိုwith်းကောင်းကင်ကိုသူတို့မျက်စိနှင့်ဖက်လျက်စကြဝiverseာကိုသူတို့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသယ်ဆောင်နိုင်သူ။ ? Gioconda Belli ။
လူတို့၏ကံကြမ္မာသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဘ ၀ အားလုံး၌ရှိသည်၊ သို့သော်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များမဟုတ်ပါ။ - Friedrich Nietzsche ။
ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၌မရှိသောအရာတစ်ခုခုမှရရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ရာများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ရလဒ်အဖြစ်ရရှိခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မေ့လျော့လေ့ရှိသည်။ - ဖရက်ဒရစ် Keonig ။
လူအများစုကသူတို့သည်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုစွန့်စားရခြင်းထက်စိတ်ဆင်းရဲဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေလိုကြသည်။ - ဒေါက်တာ Robert Anthony ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်အသက်ရှင်ခြင်းတွင်မဟုတ်ဘဲမည်သို့အသက်ရှင်ရမည်ကိုသိရှိခြင်း၌ဖြစ်သည်။ - Diego မှ Saavedra Fajardo ။
ပျော်ရွှင်မှုသည်အပြင်ဘက်တွင်မဟုတ်ဘဲအတွင်းအပြင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ - ဟင်နရီဗန် Dyke ။
လုပ်စရာလိုတာကိုလုပ်ပါ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှုမဟုတ်သော်လည်းကြီးမြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ - ဂျော့ခ်ျဘာနာ Shaw ။
ပျော်ရွှင်သောနှလုံးသည်အသက်ရှည်သည်။ - ဝီလျံရှိတ်စပီးယား။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့စကားစုစုစည်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးပါပြီ။ မင်းတို့သူတို့ကိုမင်းတို့ကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းကအခြားစာပိုဒ်တိုများဖတ်ချင်ရင်၊ ငါတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်အမျိုးအစားတွင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » သင်၏ဘဝကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေရန် +220 ပျော်ရွှင်စရာအဆင့်များ